လာပြန်ပြီ ATM Commission Fees | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » လာပြန်ပြီ ATM Commission Fees
လာပြန်ပြီ ATM Commission Fees
Posted by kanjosan on Jan 12, 2012 in Myanma News, News |9comments
ဒီနေ့ Facebook ကိုမွှေနှောက်ဖတ်ရှု့ရာ သတင်းတစ်ခုတွှေ့လို့ ရွာသားတွေကို သိအောင်အသိပေးတာပါ…
ATM Cash Withdrawal ATM A/C to A/C Transfer အတွက် Commission Fees သတ်မှတ်ခြင်းကိစ္စ။
ATM စက်ဖြင့် Cash Withdrawal ATM A/C to A/C Transfer အတွက် ATM Commission fees နှုန်းထားအားအောက်ပါအတိုင်းသတ်မှတ်ပါသည်။
(က) ငွေကျပ်တစ်သိန်းတိတိတစ်ကြိမ်ထုတ်ယူမှု / လွှဲပြောင်းမှု အတွက် ကျပ် – ၅၀၀/-
(ခ) ငွေကျပ်တစ်သိန်းနှင့်အထက် (ကျပ်သုံးသိန်းအထိ) တစ်ကြိမ်ထုတ်ယူမှု / လွှဲပြောင်းမှု အတွက် ကျပ် – ၁၀၀၀/-
CB Bank ရဲ့ Facebook မှာ အဲ့ဒီ Status တင်ထားပါတယ်… ကျွန်တော်လည်း သူတို့ရဲ့ အဓိပါယ်ကို ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာ နားမလည်ပါဘူး… ထင်တာကတော့ တစ်ခါ ATM စက်မှာထုတ်ရင် တစ်သိန်းအောက်ဆိုရင် ငွေ 500 တောင်ပေးရမတဲ့…. သကြီးရေတစ်ခါထုတ်တိုင်း ၅၀၀ ဆိုရင် ၁၀၀၀ ထုတ်ရင် ၅၀၀ ဘဲရတော့မဲ့ပုံဘဲ…
အဲ့ဒီသဘောမဟုတ်ဘဲ ATM Transfer ဖြစ်တဲ့ Location အလိုက်ကိုယူတာလား ???? ကိုယ်လုပ်တဲ့ Bank မဟုတ်ဘဲ တစ်ခြားတစ်နေရာကနေ ထုပ်လို့ရှိရင် ပေးရမှာကို ပြောတာလား…. မြန်မာပြည်မှာ နည်းနည်းလောက် နည်းပညာတိုးတတ်တဲ့ ပစည်းကို သုံးမယ်ကြံရင် ပေးလိုက်ရတဲ့ ဈေးနှုန်းက မတန်တဆဘဲ
ATM Credit Card ဆိုတာ ဘဏ်မှာ ငွေအပ်တဲ့သူတွေ ငွေထုပ်တဲ့အခါ အဆင်ပြေအောင်၊ ဘဏ်ကို လာစရာမလိုဘဲ အချန်မရွှေး ၂၄ နာရီ နီးစပ်ရာ စက်တွေမှာ ထုပ်လို့ရအောင် ဘဏ်က သူ့ရဲ့အပ်ငွေပေါ်မှာမူတည်ပြီး ပေးတဲ့ ၀န်ဆောင်မှု့ပါ… ဒါကိုသုံးတဲ့အတွက် နိုင်ငံခြား Singapore, Malaysia, Thailand, Cambodia တွေ တစ်ခြားနိုင်ငံတွေမှာ ဘာမှထပ်ပေးစရာ မလိုပါဘူး… သတ်မှတ်ထားတဲ့ ငွေပမာဏ ပြည့်မှလုပ်ပေးတာတော့ တစ်ချို့ဘဏ်တွေ ရှိခြင်ရှိမယ်… မြန်မာပြည်က ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေက နိုင်ငံခြားဘဏ် ပြိုင်ဆိုင်မှု့ မရှိတော့ သူတို့လုပ်ခြင်သလို ပြည်သူတွေဆီက မရရတဲ့နည်းနဲ့ ငွေညစ်ယူနေကြတာ…. တကယ်သာ ဒီလိုလုပ်ရင် တစ်ချိန် နိုင်ငံခြားဘဏ်တွေ ၀င်ခွင့်ပြူ ဖွင့်ခွင့်ပြုလိုက်ရင် သူတို့ရှုံးတောင်သွားလိမ့်မယ်…. အခုဆိုရင် နိုင်ငံခြားဘဏ်တစ်ချို့ ဖွင့်ဖို့ စုံးစမ်နေကြတယ်လို့ကြားတယ်… အစိုးရက ပြည်တွင်းဘဏ်တွေ နိုင်ငံခြားဘဏ်တွေနဲ့ ယှဉ်နိုင်မှ ခွင့်ပြုမယ်တဲ့…နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာ ဒီလို ATM Credit Card လုပ်တာမပြောနဲ့ Visa Card လုပ်ရင်တောင် တစ်နှစ်စာမှ US$ 10 လောက်ဘဲကျတာ… အဲ့ဒီ Visa, Master Card နဲ့ တိုင်းပြည်အတွင်းထုပ်ရင် ဘယ်လောက်မှ ၀န်ဆောင်ခ မပေးရဘူး… သူများနိုင်ငံမှာ ထုပ်မှသာပေးရတာ…
ရွာသားတွေလည်း ဒ်ီကိစ္စ နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘယ်လိုအမြင်ရှိလဲဆိုတာ ဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်…
ပြည်သူတွေကသူဋ္ဌေးတွေဆိုတော့ဆင်းရဲသားလုပ်ငန်းရှင်တွေကဟိုနားညှစ်၊ဒီနားညှစ်နဲ့ပေါ့လေ။ သနားပါတယ်။ ညှစ်ပါစေ။ ပိုက်ဆံကိုမူးစု၊ပဲစုစုနေရတာဆိုတော့။
ဘာလဲ… သူတို့လဲ အလကားပေးရမဲ့ ဝန်ဆောင်မှု အတွက် အရှုံးပေါ်နေပြန်ပြီလား။
အပြိုင်အဆိုင်မရှိ လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်လို့ရနေတာတောင် မြတ်အောင် မလုပ်နိုင်တဲ့ စီပွါးရေး ပညာရှင်တွေလား။
လူသနားအောင် အရှုံးပြပြီး လိမ်စားနေတာလား။
(က) ငွေကျပ်တစ်သိန်းတိတိတစ်ကြိမ်ထုတ်ယူမှု / လွှဲပြောင်းမှု အတွက် ကျပ် – ၅၀၀
(ခ) ငွေကျပ်တစ်သိန်းနှင့်အထက် (ကျပ်သုံးသိန်းအထိ) တစ်ကြိမ်ထုတ်ယူမှု / လွှဲပြောင်းမှု အတွက် ကျပ် – ၁၀၀၀/- ဆိုတော့သူ့ရဲ့ထုတ်ယူတဲ့ ငွေကြေးamount နဲ့တွက်ချက်တာနေမှာပါ
ဘဏ်တွေမှာ ငွေလွှဲရင် ပေးရတာကို သိတယ်မလား
၁ သိန်းလွှဲရင် ဘယ်လောက်ဆိုပြီး ပြန်ပေးရတယ်လေ
ဘယ်သူကမှ ATM မှာ ၁၀၀၀ ထဲသွားမထုတ်ပါဘူးကွယ်
အနည်းဆိုး သောင်းဂဏန်းလောက်တော့ ထုတ်မှာပါ
ဘယ်လောက်ထုတ်ထုတ် သူရဲ့လွှဲပြောင်းမှုမှာ သတ်မှတ်ငွေကြေးတော့ချထားမှာပါ
Hack ခံရတယ်ဆိုပြီး ဒေ၀ါလီတွေထွက်လာမှာ…….. သားသားကျောက်ကျော
အခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ မလေးရှားမှာတော့ ဒီလိုရှိတယ်ဗျ။
ဥပမာ။ သင်က CB bank မှာအကောင့်ဖွင့်ထားတယ် ။ CB bank က ATM credit card ကို ကိုင်းထားတယ်ဆိုပါတော့…CB bank ရဲ့ ဘယ်နေရာရှိတဲ့ ATM စက်ကမဆို အကောင့်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေဘယ်လောက်ထုတ်ထုတ် ရတယ်.။ ထပ်ပြီးဝန်ဆောင်ခပေးစရာမလိုပါဘူး။
ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ ဘဏ်ကပ်က CB bank က ကဒ်ဖြစ်ပြီး တခြားဘဏ်က ATM စက်ကနေ ငွေထုတ် တယ်ဆိုရင်တော့ ၀န်ဆောင်ခပေးရပါတယ်.။
အခုဟာက ကိုယ့်ဘဏ်ကနေထုတ်တာတောင် ၀န်ဆောင်ခထပ်ပေးရအုံးမယ် ဆိုတော့ လည်ပင်ညှစ်ရုံတင်မကဘူး ဖနောင့်နဲ့ပါ တက်နင်းသလိုဖြစ်နေမှာပေါ့…ကဒ်လုပ်တုန်းကလဲ ၀န်ဆောင်ခပေးရသေးတယ်…ငွေထုတ်တိုင်းလည်း ဖြတ်အုံးမယ်။ မောင်မင်းကြီးသားများ ထမင်းငတ်နေအုံးမယ်….
ATM စက်ကို (၂၄)နာရီအသုံးပြုနိုင်ဖို့ မီးရအောင်လုပ်ထားရဦးမယ်လေ…
နောက်တစ်ခုက ATM စက်ကို တူနဲ့ထုပြီး တစ်ခုလုံးဖြုတ်ပြီး ကားပေါ်မမတင်သွားအောင်
သူတို့မလဲ (၂၄)နာရီ ၀န်ဆောင်မှုဖြစ်အောင် မနဲလုပ်ယူထားရတာပါ…
တစ်ထောင်ကို ၅၀၀ တော့မဖြစ်လောက်ပါဘူး…
ဥပမာ…ATM စက်ထဲကနေထုတ်ဖို့ ငွေကို Bank မှာ အရင် အပ်ရပါလိမ့်မယ်…
အဲဒီအချိန်မှာ ငွေ (၂)သိန်း အပ်ခဲ့တယ်ဆိုပါစို့..
ATM ကနေ ငွေ တစ်သိန်းထုတ်ပြီးချိန်မှာ ကျန်တဲ့ တစ်သိန်းထဲကနေ ၅၀၀ နှုတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်…
အဲဒီတော့ လက်ကျန်ငွေအနေနဲ့ ၉သောင်း၉ထောင့်ငါးရာ ကျန်မယ်ဆိုပါစို့…
ဒါမှမဟုတ်လဲ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာက…ATM အတွက် အပ်ငွေကို Bank Account သပ်သပ်ဖွင့်ရမယ်
ထင်ပါတယ်…အဲဒီအတွက်…(၂)သိန်းအထိ အပ်သောသူများကို Service Charges ၅၀၀ ယူပြီး…
(၃)သိန်းနှင့် အထက်အပ်သောသူများကို ၁၀၀၀ ယူမယ်လို့ ထင်ပါတယ်…
ဘဏ်ကလူတွေလဲ အဲဒီလောက် လက်လွတ်စပယ်မလုပ်လောက်ပါဘူး…
သူတို့လဲ ငွေလွှဲကိုတောင် ငါးရာ၊ တစ်ထောင်နဲ့လုပ်သေးတာပဲ
တကယ်တော့ အဲဒီလိုမျိုး Service တွေပိုပြီး အဆင်ပြေအောင်…
လျှပ်စစ်မီး (၂၄)နာရီ တစ်စက္ကန့်မှမပျက်ပဲ ပေးထားနိုင်ဖို့လိုတယ်…
မသမာမှုတွေမဖြစ်အောင် ပြည့်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့က (၂၄)နာရီ ကင်းလှည့်နေဖို့လိုတယ်…
ယစက ဆိုတဲ့ ယာဉ်စည်းကမ်းဆိုင်ကယ်တွေကို Helmet (ဦးထုပ်) မပါဘာမပါနဲ့ လျှောက်စီးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်…
နောက်တစ်ခုက အခုထက်ပိုကောင်းတဲ့ ချိတ်ဆက်မှုတွေလိုသေးတယ်ပေါ့ဗျာ…
အေတီအမ်ဘဏ်ကတ်ဆိုတာ ခရက်ဒစ်အကြွေးဝယ်ကတ် မဟုတ်ပါဘူး။ ခရက်ဒစ်ကတ်တွေမှာ နှစ်စဉ်ကြေးပေးရတာရှိသလို အခမဲ့ဖွင့်လို့ရတာတွေလည်း တပုံကြီးပဲ။ ပိုက်ဆံပေးရရင် ပစ္စည်းဝယ် ခရီးထွက်တဲ့အခါ လျှော့ဈေးနဲ့ရတယ်၊ ပိုက်ဆံပိုသုံးမိရင် အချိန်မှီအကြွေး မဆပ်ရင် ပေးရမဲ့အတိုးနဲတယ်။ အခမဲ့ကြတော့ အဲဒီအခွင့်အရေးတွေ မရဘူး။ ဒါတောင် သုံးတဲ့ပမာဏလိုက်လို့ ပွိုင့်ထုတ်ပေးတယ်။ အဲဒီပွိုင့်နဲ့ gift card တွေဝယ်လို့ရတယ်။ ဒက်ဘစ်ဘဏ်ကတ် (အီလက်ထရောနစ်ချက်စာအုပ်သဘောမျိုး အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်ပါမယ်) ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့် checking account ထဲမှာ ပိုက်ဆံထည့်ထားရတယ်။ သာမန်အားဖြင့် ရှိတာထက် ပိုထုတ်လို့မရဘူး၊ overdraft ရလည်း ပိုထုတ်မိရင် အတိုးချလိမ့်မယ်။
ယူအက်စ်ကဘဏ်တိုင်းမှာ အေတီအမ်စက်ရှိတယ်။ အေတီအမ်စက်သီးသန့်ထားပေးတဲ့ နေရာတွေလည်းရှိတယ်။ အခုချိန်အထိတော့ ကိုယ့်ဘဏ်ကအေတီအမ်စက်မှာ ထုတ်ရင် ဝန်ဆောင်ခ မပေးရသေးဘူး၊ သူများဘဏ်စက်မှာ သွားထုတ်ရင်တော့ ၂ဒေါ်လာလောက် ပေးရတယ် ထင်တယ်။ လူစည်ကားရာနေရာတွေ၊ ဈေးဆိုင်တွေမှာ အေတီအမ်စက်ထားပြီး ဝန်ဆောင်ခယူတဲ့ ကုမ္မဏီတွေလည်းရှိတယ်။ အေတီအမ်မှာ ပိုက်ဆံထုတ်ရင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပမာဏထက် (ဥပမာ ၁၀၀၀) ပိုထုတ်ခွင့်မရှိဘူး။ တပတ်ကိုလည်း နှစ်ကြိမ်ထက်ထင်တယ် ထုတ်ခွင့် မရှိဘူး။ အခိုးခံရရင် ဆုံးရှုံးမှု မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးထားတာ။ မက်ဒေါ်နယ်လိုဆိုင်မျိုးတွေမှာလည်း အေတီအမ်စက်တွေရှိတယ်။ တခါထုတ် ၉၉ပြားပဲ ပေးရတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ထုတ်လို့ရတဲ့ ပမာဏနည်းတယ်။
တခါထုတ် ငါးရာ၊ တထောင်ဆိုတာ ကိုယ့်ဘဏ်က အေတီအမ်စက်မှာ ကိုယ့်ဘဏ်ကတ်နဲ့ ထုတ်မယ်ဆိုရင် မပေးသင့်ဘူးထင်တယ်။ သူများဘဏ်ကတ်နဲ့ ကိုယ့်စက်ကို လာသုံးရင် တမျိုးပေါ့နော်။ တခုတော့ရှိတယ် မြန်မာပြည်မှာ အေတီအမ်ကတ်သုံးတာ သူကြွယ်သုံးသဘောဆိုရင်တော့ ကိစ္စမရှိဘူး၊ နိုင်ငံဂျားမှာလို အများသူငါ နေ့စဉ်ဓူဝ သုံးစွဲတဲ့ အဆင့်ဆိုရင် မလုပ်သင့်ဘူး။
အသုံးတွင်ကျယ်လာရင် ကတ်အခိုးခံရပြီး ပိုက်ဆံထုတ်သွားတာ၊ အေတီအမ်စက် ငွေရှင်းကောင်တာတွေမှာ ဗွီဒီယိုကင်မရာ အသေးလေးတွေ ခိုးတတ်ပြီး ကတ်နံပါတ်အခိုးခံရတာ စတဲ့မှုခင်းတွေ ပိုလာမယ်။ သုံးသူများကလည်း အကျင့်မရှိသေးရင် အေတီအမ်စက်ထဲ ကတ်တန်းလန်းမေ့ကျန်ခဲ့၊ pass word ကို လူမြင်သူမြင် သုံးငွေထုတ်၊ သူတပါးကို အလွယ်ထုတ်ခိုင်းလို့ ပြသနာဖြစ် စတာတွေ ဖြစ်ကြအုံးမယ်။ ဘဏ်များမှာ အဲဒီအေတီအမ် အသုံးအတွက် အစကနဦးမှာ ဘဏ်ဝန်ထမ်းများ စက်အနားနေပြီး မသုံးတတ်သေးသူများ နားလည်အောင် ကူညီလမ်းပြနိုင်ရင် ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။
သဘောလား။ အဲဒဲီလိုသတ်မှတ်တာမျိုးလည်းမဖြစ်သင့်ပါဘူး.။တခါထုတ်ဘယ်လောက်ဆိုတာမျိုးဘဲဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ၅၀၀ကျပ်ဆိုတာလည်းတော်တော်များနေပါတယ်။စက်က၀န်ဆောင်မှုပေးတာပါ၊လူက၀န်ဆောင်မှုပေးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဝန်ဆောင်ခလျှော့ပါဦး။
ယူအက်စ်မှာ.. ဘဏ်သွားအပ်ရင်..Bank of America ရော.. Chase ရော… ထိမ်းသိမ်းခလစဉ်ကြေးပေးနေရတာတော့ရှိတယ်..။
တလ.. ၁၀ဒေါ်လာကျော်ကျော်.. ပေးရပါတယ်..။
စက်တွေ…. ရုံးတွေဖွင့်ရတာမို့.. အတိုးအမြတ်စားတာနဲ့တင် မလောက်တော့ပဲ.. ပိုယူ…အဲ.. ပိုရိပ်တဲ့ သဘောပါ..။
ပြောသာပြောရတာ.. အေတီအမ်စက်က.. တလုံးသောင်းဏန်းအသာလေးပဲ..။
အင်တာနက်ကလည်း ချိပ်ရဦးမှာမို့.. စရိတ်ကတော့ သိသိသာသာထောင်းပါလိမ့်မယ်..။
ယူအက်စ်ဆန်ရှင်နဲ့.. ဘဏ်စံနစ်ကို ဘယ်လိုလှည့်မလည်းဆိုတာတော့.. သိချင်မိသား…။